Wabi-Sabi र ग्राफिक डिजाइन क्रिएटिव अनलाइन
Wabi-Sabi र ग्राफिक डिजाइन
वबी-साबी एक जापानी चलन हो जसको उत्पत्ति चिया समारोहबाट आउँदछ। यो वर्तमान, सौंदर्य मात्र दार्शनिक छैन, को कुरा गर्दछ प्रकृति अवलोकन, the अपूर्णताको स्वीकृति र को कुरूप चीजहरूमा सौन्दर्यको मूल्यांकन। लियोनार्ड कोरेनले आफ्नो पुस्तक "वबी-साबी फर कलाकार, डिजाइनर, कवि र दार्शनिकहरू" मा जापानी दृष्टिकोणको जीवन र हामीलाई वरपरको वातावरण नजिक पुग्ने माध्यमको रूपमा कुरा गर्छन्।
“वबी-साबी अपूर्ण, स्थायी र अपूर्ण चीजहरूको सौन्दर्य हो।
यो विनम्र र नम्र चीजहरूको सौन्दर्य हो।
यो अपरंपरागत चीजहरूको सौन्दर्य हो। "
मूल रूपमा, "Wabi" र "Sabi" का फरक अर्थ थियो। "साबी" को अर्थ "चिसो" वा "सुक्खा" थियो, जबकि "वबी" को अर्थ प्रकृतिमा एक्लै बस्ने समस्या थियो। चौधौं शताब्दीमा शुरू, यी अर्थहरू अधिक सकारात्मक मूल्यहरूमा विकसित भयो। आज यी अवधारणाहरू यति अस्पष्ट भएका छन् कि अर्कोलाई उल्लेख नगरी एउटा उल्लेख गर्न गाह्रो छ। हामी "वाबी" को कुरा गर्न सक्छौं र प्राकृतिक संसारमा मानव द्वारा निर्मित ती वस्तुहरुको देहाती सरलतालाई बुझाउन सक्छौं, साथै "साबी" को कुरा हो जुन नष्ट हुँदै गएको को सुन्दरतालाई जनाउँछ।
यी असिद्धता र परिवर्तनको यी मानहरूको बौद्ध धर्म र जापानी समाजमा गहिरो जरा छ। यद्यपि यी मूल्यहरू पश्चिमी कला र संस्कृतिमा देख्न सकिन्छ।
1 यस सौन्दर्य र दार्शनिक वर्तमान को रक्षा गर्छ?
2 Wabi-Sabi र ग्राफिक डिजाइन
3 यस प्रकारको डिजाइनसँगै केहि तत्वहरू छन्?
यस सौन्दर्य र दार्शनिक वर्तमान को रक्षा गर्छ?
वर्तमानमा वबी-साबीले प्रकृतिको अवलोकनलाई सत्यको खोजीको रूपमा बचाउँदछ। यस अवलोकनबाट तीन पाठ लिइएको: केहि पनि स्थायी छैन, सबै कुरा अपूर्ण छ y सबै कुरा अपूर्ण छ.
यी अवधारणाहरू स्पष्टसँग, हस्तकलाका टुक्राहरू, सिरेमिकमा क्र्याक, लिनेन वा ऊन जस्ता सामग्रीहरूले यी सौंदर्य र दार्शनिक प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा परिभाषित गर्न सक्दछन्। वबी-साबी भनेको चीजहरूको सुन्दरता हो जुन सुकियो, पहिरिन्छ, कलंकित छ, दाग लाग्न सक्छ, ईफेमेन्टल।
Wabi-Sabi द्वारा प्रेरित डिजाइन एक दृश्य डिजाइन हो, जहाँ बनावट र लगाउने मुख्य पात्र हो। यस तरिकाले, यसले अपूर्ण र अपूर्णलाई मूल्य दिन्छ। एक सरल, कार्यात्मक र austere डिजाइन एक डिजाइन जुन वाबी- Sabi सोच नजिक छ। सबै कुराको प्रक्रिया छ र चीजहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोणले परिप्रेक्ष्यमा पुग्दछ कि परिपूर्ण डिजाइन सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक छैन: यदि केहि पनि सँधै रहदैन भने किन पूर्णतालाई पछ्याउने? अस्थायी चीजको रूपमा डिजाइनको सोचले, यो सरल र कार्यात्मक डिजाइनको साथ आउन सजिलो हुन्छ। यो असिद्धता मनाउने बारेमा हो.
टोबी एनजी डिजाइन द्वारा डिजाइन
यस प्रकारको डिजाइनसँगै केहि तत्वहरू छन्?
सरलता र न्यूनतावाद
समतल र तटस्थ रंगहरू
लगाउनु र च्यात्नु
वबी-सावी एकलता, परिवर्तन र दु: ख को बौद्ध मूल्यमा आधारित दर्शनको रूपमा शुरू भयो। यो एक दर्शन को लागी थियो सरल, austere, रुडाeअपूर्ण। यी तत्वहरूबाट डिजाइन डिजाइन आन्दोलन सिर्जना गरिएको थियो जुन प्रवृत्तिमा बढ्दो छ, यद्यपि यो भर्खर पश्चिममा आइपुगेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » Wabi-Sabi र ग्राफिक डिजाइन
आइकन ब्रान्डको पछाडि के हो